३०८६१ हावाल्यान्ड- विविधा - कान्तिपुर समाचार
माघ ५, २०७५ विमल निभा
काठमाडौँ — बिदाको दिनमा पनि केटाकेटीहरूलाई स्कुलमा बोलाइएको थियो । कुनै महत्वपूर्ण कार्यक्रम नै हुनुपथ्र्याे । यससम्बन्धमा कसैलाई पनि केही जानकारी दिइएको थिएन । त्यसैले कुरो गोप्य नै थियो । सबैलाई स्कुल पछाडिको घाँसेचउरमा भेला गरिसकेपछि
नयाँ स्काउट मास्टरसाबले भने, ‘तिमीहरूलाई किन बोलाइएको हो, थाहा छ ?’
‘थाहा छैन सर ।’ सबै केटाकेटीहरूले एकसाथ जवाफ दिए ।
‘आज हामी एउटा खास ठाउँमा जाँदैछौं भाइबहिनीहरू हो ।’
‘कहाँ सर ?’
‘सधैंजसो हाफपाइन्ट नलगाएका स्काउट मास्टरसाब दौरासुरुवाल र ढाकाटोपीमा मुस्कुराए । यो मुस्कानबाट कुनै भेउ पाउन नसकेर केटाकेटीहरूले उँचो आवाजमा दोहोर्‍याए, ‘कहाँ सर ?’
‘मैले भने नि, हामी एउटा खास ठाउँमा जाँदैछौं ।’ यसपटक स्काउट मास्टरको मुस्कान गहिरिएकोले उनको बाक्लो जुंगा हल्लियो, ‘हामी ठूलै ठाउँमा जाँदैछौं भाइबहिनीहरू ।’
‘नगरकोटमा हो सर ?’ ६ क्लासको मिङमाले सोध्यो ।
‘त्यसो भए पिकनिकमा जाने होला सर ।’ चार क्लासकी नयनताराले सानो स्वरमा भनी ।
‘त्रिभुवन पार्कमा हो सर ?’ तीन क्लासको रामाशिषले पनि सोध्यो ।
‘होइन, होइन, मैले अघि नै भनें नि, हामीलाई ठूलै ठाउँबाट बोलाइएको छ ।’ स्काउटमास्टरको ओठको मुस्कान रोकिएको थिएन ।
‘कुन ठूलो ठाउँबाट सर ?’ सबैका आवाज फेरि एकैचोटी गुन्जियो ।
‘हामीलाई बालुवाटारबाट निम्तो आएको छ भाइबहिनीहरू ।’
‘के बालुवाटार सर ?’
यो प्रश्न सुनेर स्काउटमास्टरसाब एक्कासी गम्भीर भए । उनले घाँसेचउरमा गोलाकार भएर उभिएका केटाकेटीहरूलाई पालैपालोसँग हेरे । अनि आफ्नो भारी आवाजमा भने, ‘भाइबहिनीहरू, बालुवाटार कुनै सानो ठाउँ होइन । हाम्रो मुलुकको ठूलो मानिस बस्ने ठूलो ठाउँ हो । यति पनि तिमीहरूलाई थाहा छैन ?’
‘थाहा छैन सर ।’
‘राजा बस्ने ठाउँ हो सर ?’ एक क्लासको अष्टमानले सोध्यो ।
‘होइन, मन्त्री बस्ने ठाउँ हो ।’ यसको जवाफ दुई क्लासको अनवरले दियो ।
‘तर कसरी जाने सर ?’ अष्टमानले तुरुन्तै भन्यो, ‘हाम्रो स्कुलको बस त बिग्रिएको छ ।’
‘हो सर, बस बिग्रिएको एक महिनाभन्दा बढी भइसकेको छ सर ।’ सबैले लगत्तै ठूलो स्वर पारेर भने, ‘हाम्रो बस कहिले बन्छ सर ?’
‘बस बिग्रिएर केही भएको छैन ।’ अलिकति तल ढल्किएको ढाकाटोपीलाई हातले मिलाउँदै स्काउटमास्टरले भने, ‘हामीलाई लिन बालुवाटारबाट ठूलो गाडी आएको छ ।’
हावाको रफ्तारमा हुइँकिएर पहेँलो रंगको ठूलो गाडी अघि बढ्यो । त्यसपछि सहिदगेट, रत्नपार्क, दरबारमार्ग, नक्साल र गैरीधारा हुँदै भाटभटेनी पुग्यो । स्काउट मास्टरसाब गाडीको ड्राइभरसँगै अघिल्तिरको सीटमा बसेका थिए । र केटाकेटीहरू भने आआफ्ना सीटमा बसेर रमाइरहेका थिए । पुरै सडक खाली थियो । किनभने बालुवाटारको पहेँलो रंगको ठूलो गाडी देखेर सबै साइकल, ट्याम्पु, माइक्रोबस, मिनिबस आदि सडकछेउमा रोकिएका थिए । केहीबेरपछि बालुवाटार पनि आइपुग्यो ।
‘भाइबहिनीहरू, विस्तारै लाइन लगाएर ओर्ल ।’ केही बलिया पुलिसजस्ता देखिनेहरू गेटमा उभिएका थिए ।
‘यहाँ आइपुग्न तिमीहरूलाई कुनै अप्ठ्यारो त भएन ?’ एक मोटे पुलिसले केटाकेटीहरूसँग सोध्यो ।
‘कसरी अप्ठ्यारो हुन्छ ?’ एक्कासी फुच्ची नयनताराले भनी ।
‘किन नानी, किन अप्ठ्यारो भएन ?’
‘बाटो त खालि थियो नि ।’ नयनताराले जवाफमा भनी ।
‘हो, हाम्रो बाटोमा कोही पनि थिएन ।’ सबैले एक स्वरमा नयनताराको कुरामा सही थापे ।
सबै केटाकेटीहरूलाई भित्र हलमा लगियो । त्यहाँ लामोखाले सीसाको टेबुलमा थरीथरीका खानेकुराहरू सजाएर राखिएको थियो । मिठाइ, विस्कुट, फलफूल, पाउरोटी, मोमो, केक, चाउचाउ, सेल, तरकारी, भुजिया, चिउरा इत्यादि । केटाकेटीहरूले आआफ्नो मन परेको खाना पेटभरि खाए ।
एक घन्टापछि कालो चस्मा लगाएको एक जना त्यहाँ देखापर्‍यो । पुक्क परेको गाला । केही उक्सेको पेट । (हलुका मुस्कानसहित) । एक्कासी सबै जर्‍याकजुरुक खडा भए । र पुलिसजस्ता देखिनेहरूले फटाफट स्यालुट मारे । हाम्रो स्काउट मास्टरसाबले पनि यही मुद्रामा सँगसँगै भुइँमा जुत्ता बजारे । त्यसपछि उनले केटाकेटीहरूलाई विस्तारै फुसफुसाएर के जानकारी दिए भने ‘उहाँले नै माया गरेर तिमीहरूलाई यहाँ आउने निम्तो दिनुभएको हो ।’ सबै केटाकेटीहरूलाई देखेर पुक्क गाला भएको व्यक्ति मुसुमुसु मुद्रामा हाँसिरहेका थिए ।
वास्तवमा यिनै बालुवाटारका वडाहाकिमद्वारा विशेष भाषण दिने कार्यक्रम थियो । यही सिलसिलामा स्कुलका केटाकेटीहरूलाई बालुवाटार बोलाइएको थियो । अन्य स्कुलका थुप्रै केटाकेटीहरू पनि अर्काे मुख्य हलमा जम्मा थिए । त्यहाँ ठूलै मञ्च बनाइएको थियो । र केटाकेटीहरूलाई बस्नका लागि लहरै रंगीचंगी कुर्सीहरू । सबै केटाकेटीहरू कुर्सीमा बसिसकेपछि बालुवाटारका बडाहाकिमले माइक समातेर भाषण दिन थाले ।
भाइबहिनीहरू हो, तिमीहरूलाई यहाँ बोलाइएको कारण के हो भने सानैदेखि नै भाइबहिनीहरूले केही कुराहरू राम्ररी बुझ्नुपर्ने हुन्छ । सबैलाई थाहै छ, म मुलुकलाई राम्रो बनाउन लागेको छु । हाम्रो समृद्ध मुलुक । यही प्रयासमा काम धेरै अगाडि बढिसकेको छ । कहाँसम्म भने हामीले मुलुकको सीमालाई नै नाघिसकेका छौं । यति मात्र होइन, यो पृथ्वीभन्दा माथि पुगिसकेका छौं ।
अब म यसलाई अझ राम्ररी भन्छु, ध्यान दिएर सुन भाइबहिनीहरू । हेर, यहाँभन्दा पाँच प्रकाश वर्ष पर एउटा ग्रह छ । त्यसलाई मैले नै खोज्न लगाएको हुँ । र प्रकाश वर्षबारे तिमीहरूले आआफ्नो विज्ञानकक्षामा पढेको हुनुपर्छ । मैले पनि आफ्नो स्कुलकालमा पढेको छु । यो प्रकाश झन्डै तीन लाखप्रति सेकेन्डको हिसाबले अघि बढ्ने गर्छ । यही गतिमा हिंड्ने हावाको जहाज पनि हामीले तयार गरिसकेका छौं । यो आरएनएसीको हवाइजहाज जस्तो होइन नि ! यही हावाजहाजमा बसाएर सबै देशबासीलाई त्यो ग्रहमा लैजाने मेरो योजना हो । त्यो पृथ्वीजस्तै आफ्नै सूर्यको ह्याबिटेबल जोनमा रहेको छ । हाम्रो नयाँ पृथ्वी । र त्यसको नाम हो– ३०८६१ हावाल्याण्ड ।
हावाल्याण्ड कुनै सामान्य खालको ग्रह होइन । जस्तो कि नामले नै थाहा हुन्छ– ३०८६१ हावाल्याण्ड हो । ३०८६१ को माने के हो भने हाम्रो यहाँको ३०८६१ दिन बराबर त्यहाँ एक दिन हुन्छ । र हामी त्यहाँ एक दिनमा ३०८६१ दिनको काम गरिसक्नेछौं । त्यो हावाल्याण्डमा सबै काम यही हावाको बेगमा हुनेछ । अनि हामी हावाको सहर बसाउने छौं । हाम्रो हावाको राजधानी हुनेछ । त्यहाँ हावाका सडकहरू हुनेछन् । हामी हावाको घरमा बस्नेछौं । हावाको भान्साकोठा हुनेछ । र हामी सबै हावाको खाना खानेछौं । अनि हावाको मोटरमा बसेर हावाको सडकमा सरर गुड्नेछौं । सबथोक हावाको हुनेछ । हावाको फ्याक्ट्री । र त्यहाँ हावाको मेसिनहरू हुनेछन् । त्यसको उत्पादन हावाको हुनेछ । हामी हावाको व्यापार गर्नेछौं । र यसरी हावाको उन्नति हुनेछ ।
हावाको ३०८६१ हावाल्याण्डको खोज किन गरिएको हो भने त्यो ठ्याक्कै हाम्रो मुलुक नेपालजस्तो रहेको छ । उही आकारको । नक्सामा उही आकारको देखिए पनि असलमा ३०८६१ हावाल्याण्ड हाम्रो मुलुकभन्दा हजारौं गुना ठूलो रहेको छ । र यसलाई म अझ ठूलो बनाउन लगाउनेछु । हावाको भएकोले जति पनि ठूलो पार्न सकिनेछ । मलाई सानो मुलुक मन पर्दैन । त्यसैले हाम्रो ३०८६१ हावाल्याण्ड धेरै नै ठूलो हुनेछ । र हामी सबै ठूलो मुलुकको बासिन्दा हुनेछौं । ३०८६१ हावाल्याण्डको नागरिक ।
भाइबहिनीहरू, तिमीहरू सबै तयार भएर बस । सबभन्दा पहिले म ससाना केटाकेटीहरूलाई ३०८६१ हावाल्याण्डमा पठाउने छु । त्यसपछि विस्तारै ठूलाहरूका पालो आउनेछ । यसरी हामी सबै त्यो ग्रहमा पुग्नेछौं । त्यही हाम्रो असल मुलुक हुनेछ । अब त्यो दिन टाढा छैन भाइबहिनीहरू । हाम्रो समृद्धिको हावाल्याण्ड । जय ३०८६१ हावाल्याण्ड !
प्रकाशित : माघ ५, २०७५ ०९:३९
खाना–साना खाएर हिँड्ने बेलामा दाजुहरूले कान्छो राजकुमारलाई भनेछन्– ‘यो को हो ? यो त मायाविनी जस्तो छ । कतै बोक्सी त होइन ? हिजोसम्म झुस्स परेकी बाँदर्नीजस्ती, आज एकाएक यस्तो मोहिनी कसरी भइन् ? तिमीले यसको खोज–तलास गर । यसले हामीलाई छल पो गर्दै छ कि † कुनै किचकन्डी पो हो कि ! तिमीले यसको भोटो (बाँदर्नीका रूपमा लगाइएको लबेदा) खोज ।’
रुखको टोड्काबाट ल्याइएकी बाँदर्नी मैयाको योग्यता, सीप, बनाएको परिकार, लुगाफाटो राजपरिवारमा स्वीकृत भएन । उनको उपहास भयो । उनको योग्यता शंकास्पद भयो । उनलाई बोक्सी र परचक्री भनियो, राम्रो नजरले हेरिएन । त्यतिले नपुगेर उनको भोटोसमेत डढाइयो । अर्को शब्दमा भन्दा उनको परिचय, अस्मिता, पहिचान नै नष्ट पारियो । नयाँ परिचय, अस्मिता, पहिचान थोपर्ने कोसिस गरियो । उनलाई लुगा फेर्न विवश गराइयो, बोली परिवर्तन गराइयो । प्रत्येक नौली बुहारीले नयाँ घरमा जाँदा, खासगरी विभिन्न सांस्कृतिक परिवेश भएको घरमा जाँदा यो भोगेको हुनुपर्छ । निश्चय पनि कथाकारले यो कथा कथ्दा नयाँ बुहारीको नियतिलाई ध्यानमा राखेको थियो ।
विवाहमा भनेजति दाइजो नल्याएकामा मट्टितेल हालेर डढाइएका बुहारी आज पनि हाम्रो समाजमा सुनिन्छ–देखिन्छ । यस्तै महिलाको अवस्थामा बाँदर्नी मैया पुगेकी थिइन् । एकातिर बाँदर्नी मैयाको पोलिएको भोटोले दाइजो र इज्जतका अभावमा पोलिएका नवविवाहितातिर संकेत गर्छ । अर्कोतिर मनुष्यको जीवनमा चमत्कार हुन्छ भन्ने मान्यता र उदाहरणले कथालाई सुखान्त बनाउँछ ।